Thwebula Deluge 1.3.13 – Vessoft
ISikhukhula – an lula ukusebenzisa iklayenti sesifufula ukwabelana amafayela nge internet. Isofthiwe ikuvumela ukudala amafayela sesifufula thwebula noma wehlise kokuqukethwe kumanethiwekhi zezifufula. KuZamcolo isekela izici standard of amaklayenti zezifufula, kuhlanganise ijubane ukulanda zokulayisha nezokuthulula impahla, izithombe amafayela ezithile ukusatshalaliswa, asebenze seseva njll software kwenza ukubuka ulwazi mayelana amafayela preview. Futhi kuZamcolo ikuvumela ukuba bandise amathuba ngokuxhumanisa anezele.
Kulandwa futhi athula of amafayela
Ibonisa amafayela eziningiliziwe
Ukubukwa kuqala amafayela
Amazwana on Deluge:
Deluge Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Popcorn Time 5.6
-Internet Isiphequluli ne ubuchwepheshe besimanje ukuhlala ukhululekile ethandwayo amanethiwekhi omphakathi. In the isofthiwe kukhona choice omkhulu iinhloko page izakhiwo.
Umhleli Audio Isofthiwe ukudala nekambiso umculo emsebenzini. Isofthiwe isebenzisa eziphambili umsindo ubuchwepheshe kanye nesethi amathuluzi virtual.